UTORRENT ANAGHỊ EBUDATA - UTORRENT - 2019
Igwefoto IP bụ ngwaọrụ netwọk nke na-enyefe vidiyo na usoro protocol IP. N'adịghị ka analog, ọ na-akọwa onyinyo ahụ na usoro dijitalụ, nke na-anọgide na ya ruo mgbe ngosi na nyocha. A na-eji ngwaọrụ iji nchịkwa nke ihe, yabụ anyị ga-akọwa otu esi jikọọ igwefoto IP maka onyunyo vidiyo na kọmputa.
Otu esi ejikọ igwefoto IP
Dabere n'ụdị ngwaọrụ, igwefoto IP nwere ike ijikọ na PC site na iji eriri ma ọ bụ Wi-Fi. Mbụ ị ga-achọ ịhazi nhazi nke netwọk mpaghara ma banye site na ntanetị weebụ. Ị nwere ike ime nke a onwe gị site na iji ngwaọrụ Windows ma ọ bụ site na ịwụnye ngwanrọ pụrụ iche na kọmputa gị nke na-abịa na igwefoto vidiyo gị.
Nkeji nke 1: Ntọala igwefoto
Igwefoto niile, n'agbanyeghị ụdị nnyefe data a na-eji, ejikọrọ na kọntaktị kọntaktị kọmputa. Maka nke a ị chọrọ eriri USB ma ọ bụ Ethernet. Dị ka usoro, ọ na-abịa na ngwaọrụ. Usoro:
Jikọọ camcorder na PC na igwe pụrụ iche ma gbanwee adreesị nke subnet ndabara. Iji mee nke a, gbalịa "Network and Sharing Center". Ị nwere ike ịbanye na menu a site na "Ogwe njikwa" ma ọ bụ site na ịpị akara ngosi netwọk na tray.
N'akụkụ aka ekpe nke window ahụ meghere, chọta ma pịa akara "Ntọala ngbanwe mgbanwe". Njikọ dị maka kọmputa na-egosipụta ebe a.
Maka netwọk mpaghara, mepee menu "Njirimara". Na windo nke mepee, taabụ "Network"pịa na "Internet Protocol Version 4".
Kọwaa adreesị IP nke igwefoto na-eji. A na-egosi ozi na akara ngwaọrụ, na ntụziaka. Ọtụtụ mgbe, ndị na-emepụta ihe na-eji ya eme ihe192.168.0.20, ma ụdị dị iche iche nwere ike ịnweta ozi dị iche iche. Dee adreesị ngwaọrụ na paragraf "Ọnụ Ụzọ Isi". Ndepụta ntinye na-ahapụ ndabara (255.255.255.0), IP - dabere na data igwefoto. Maka192.168.0.20gbanwee "20" nye uru ọ bụla ọzọ.
Na windo nke pụtara, tinye aha njirimara na paswọọdụ. Dịka ọmụmaatụ "admin / admin" ma ọ bụ "admin / 1234". The data ikike kpọmkwem dị na ntụziaka na na website ukara nke emeputa.
Mepee ihe nchọgharị na n'ime adreesị ụlọ na-abanye kamera IP. Tụkwasị na nke ọzọ ikike data (aha njirimara, paswọọdụ). Ha nọ na ntuziaka na label nke ngwaọrụ (n'otu ebe dị ka IP).
Mgbe nke ahụ gasịrị, interface weebụ ga-apụta, ebe ị nwere ike soro foto ahụ site na igwefoto, gbanwee ntọala ndị bụ isi. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji ngwaọrụ dị iche iche maka onyunyo vidiyo, jikọọ ha iche iche ma gbanwee adreesị IP ọ bụla dabere na data subnet (site na interface weebụ).
Nkeji nke 2: Lee ihe ngosi
Mgbe igwefoto jikọọ ma hazie, ị nwere ike inweta ihe oyiyi site na ihe nchọgharị. Iji mee nke a, banye na adreesị ya na ihe nchọgharị ma banye na iji nbanye na paswọọdụ gị. Ọ dị mfe iji mepụta onyunyo vidiyo na iji ngwanrọ pụrụ iche. Esi eme ya:
Wụnye mmemme ahụ nke na-abịa na ngwaọrụ ahụ. Ọtụtụ mgbe ọ bụ SecureView ma ọ bụ IP Viewer igwe - software zuru ụwa ọnụ nke enwere ike iji na ese foto vidiyo dị iche iche. Ọ bụrụ na enweghi ọkwọ ụgbọala ọ bụla, wee budata ngwanrọ ahụ site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ.
Mepee usoro ihe omume na site na menu "Ntọala" ma ọ bụ "Ntọala" tinye ngwaọrụ niile ejikọrọ na netwọk. Iji mee nke a, jiri bọtịnụ ahụ "Tinye ọhụrụ" ma ọ bụ "Tinye igwefoto". Na mgbakwunye, dee data ikike (nke a na-eji iji nweta ihe nchọgharị).
Ndepụta nke ụdị dịnụ na ozi zuru ezu (IP, MAC, aha) ga-apụta na listi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike iwepu ngwaọrụ ejikọrọ na listi.
Pịa taabụ "Gwuo"ịmalite ikiri vidiyo vidiyo. N'ebe a, ị nwere ike ịtọ oge nhazi, izipu ọkwa, wdg.
Ihe omume ahụ na-echefu ihe niile gbanwere, yabụ na ị gaghị agaghachite ozi. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịhazi profaịlụ dị iche maka nlekota oru. Nke a dị mfe ọ bụrụ na ị na-eji ihe karịrị otu igwefoto vidiyo, mana ọtụtụ.
Lee kwa: Software maka onyunyo vidiyo
Njikọ site na Server Ivideon
Usoro ahụ dị mkpa naanị maka ngwa ndị dabeere na IP na nkwado Ivideon. Nke a bụ ngwanrọ maka WEB na kamera IP nwere ike itinye na Axis, Hikvision na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Download na Ivideon Server
Mepụta akaụntụ na ukara Ivideon. Iji mee nke a, tinye adreesị ozi-e, paswọọdụ. Tụkwasị na nke a, dee ihe mere ị ji eji (azụmahịa, nkeonwe) ma kwenye na usoro ọrụ na nzuzo.
Nwepụta nkesa na Ivideon na wụnye ngwanrọ na kọmputa gị. Gbanwee ụzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa (site na ndabara faịlụ adịghị etinye n'ime ya "AppData").
Meghee usoro ihe omume ma jikọọ ngwa IP na PC. Ọkachamara na-egosi maka nhazi akpaka. Pịa "Na-esote".
Mepụta faịlụ nhazi ọhụrụ ma pịa "Na-esote"ịga n'ihu na-esote ogbo.
Debanye na akaụntụ Ivideon. Dee adreesị ozi-e, ọnọdụ nke ese foto (site na listi ọdịda).
Achọpụta akpaka maka ese foto na ihe ndị ọzọ ejikọrọ na PC ga-amalite. Igwe foto niile achọtara na ndepụta nke dịnụ. Ọ bụrụ na agbanyeghị ngwaọrụ ahụ, jikọọ ya na kọmputa ma pịa "Tinyegharịa ọchụchọ".
Họrọ "Tinye Igwefoto IP"iji tinye akụrụngwa na ndepụta nke dị na ha. Mgbawa ọhụrụ ga-apụta. N'ebe a, kọwaa njirimara ngwaike (emeputa, nlereanya, IP, aha njirimara, paswọọdụ). Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịrụ ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche, wee megharịa usoro ahụ. Zọpụta mgbanwe gị.
Pịa "Na-esote" ma gaa nzọụkwụ ọzọ. Site na ndabara, Nyochawa Ivideon nyochaa ntaneti na vidiyo na-abata, ya mere ọ na-enyere ndekọ aka mgbe ọ na-achọpụta ụda ntụrụndụ ma ọ bụ ihe na-agagharị na oghere igwefoto. Nhọrọ gụnyere ihe ntinye ederede ma dee ebe ị ga-echekwa faịlụ.
Kwenye nbanye na akaụntụ nkeonwe gị ma gbakwunye usoro ihe omume ahụ. Mgbe ahụ, ọ ga - amalite ozugbo ị gbanyechara kọmputa. Igwe mmemme mmeghe ga-emeghe.
Nke a mejupụtara nhazi igwefoto IP. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịgbakwunye ngwá ọrụ ọhụrụ site na ihuenyo mbụ nke Ivideon Server. N'ebe a, ị nwere ike ịgbanwe mpaghara ndị ọzọ.
Jikọọ na igwe Igwefoto IP Super Client
Igwefoto Client Igwefoto IP bụ ngwanrọ zuru ụwa ọnụ maka ijikwa ngwá ọrụ IP na ịmepụta usoro onyunyo vidiyo. Na-enye gị ohere ịlele vidio ahụ n'egbughị oge, detuo ya na kọmputa gị.
Download igwe Igwefoto Igwefoto Igwefoto IP
Gaa na nghazi nkesa nke usoro ihe omume ahụ ma nọgide na echichi na ọnọdụ nkịtị. Họrọ ọnọdụ nke ngwanro ahụ, kwenye na mmepụta nke mkpirisi maka ịnweta ngwa ngwa.
Mepee igwe Igwefoto Igwefoto IP site na mmalite ma ọ bụ ụzọ mkpirisi na desktọọpụ. Nche nche nche Windows gosiri. Kwe ka SuperIPCam jikọọ na Ịntanetị.
Igwe windo Igwe Igwe Igwefoto Igwe Igwefoto IP gosipụtara Iji eriri USB, jikọọ ngwaọrụ na kọmputa ma pịa "Tinye Igwefoto".
Mgbawa ọhụrụ ga-apụta. Pịa taabụ "Jikọọ" ma tinye nkọwa ngwaọrụ (UID, paswọọdụ). Enwere ike ịchọta ha na ntuziaka.
Pịa taabụ "Dekọọ". Kwe ka ma ọ bụ kwụsị ọrụ ahụ ịchekwa vidiyo ahụ na kọmputa. Mgbe pịa nke a "OK"iji tinye mgbanwe niile.
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ile foto ahụ site na ọtụtụ ngwaọrụ. A na-agbakwunye ha n'otu ụzọ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-agbasa ozi ahụ na isi ihuenyo. Lee ị nwere ike ijikwa usoro onyunyo vidiyo.
Iji jikọọ igwefoto IP maka onyunyo vidiyo, ịkwesịrị ịtọpụta netwọk mpaghara ma denye aha ngwaọrụ site na interface weebụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịlele ihe oyiyi ahụ site na ihe nchọgharị ma ọ bụ site na ịwụnye ngwanrọ pụrụ iche na kọmputa gị.